China Dance Medal စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ကွမ်းခြံကုန်း
ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မှချီးမြှင့်သောဆုတံဆိပ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသော (3-3 / 4″) သို့မဟုတ်အကြီးမားဆုံး (4-3 / 4″) ဆုတံဆိပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်“ အိမ်သို့ယူပါ”! ၁၀၀% လေဆာဖြတ်ထားသော acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးထူထပ်သော ၁/၄, ဤသတ္တဝါများသည်ကြီးမားပြီးရောင်စုံသည်။ တောက်ပသောရောင်စုံစာသားနှင့်ဂရပ်ဖစ်များကို UV မှင်များဖြင့်တိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ထားသည် ပြင်းထန်သောအရောင်များဖြင့်လှပသောညှိုးနွမ်းပျက်စီးလွယ်သောပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း (ဤသည်စျေးပေါသောစတစ်ကာမဟုတ်ပါ !!) ဆုတံဆိပ်များသည်အလွန်အစွမ်းထက်သော 1-1 / 2″ ကျယ်ပြန့်ချုပ်ထားသောလည်ပင်းနှင့်အရောင်များနှင့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ ဤဆုတံဆိပ်များ၏နောက်ဘက်သည် glossy acrylic ဖြစ်ပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထွင်းထားသော micro-ပါးလွှာသော metallic tag ကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ တံဆိပ်များကိုရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနီတို့ဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ စာသားအားလုံးသည်အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ ထွင်းထားသောနောက်ကျောစာတန်းများကိုလိုချင်ပါက၊ သင်၏အမှာစာအားချသောအခါ (သင်စာသား ၄ လိုင်းနှင့်မျဉ်းတစ်ကြောင်းလျှင်အက္ခရာ ၂၂ ခုနှင့်အက္ခရာ ၂၂ လုံးအထိ) သင်မည်သည့်ပုံစံပေါ်စေလိုသည်ကိုအတိအကျရိုက်ထည့်ပါ။
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းသောလေဆာဖြတ် acrylic နှင့်ထူထပ်သောလေးပုံတစ်ပုံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော MEDALS သည်အရောင်အသွေးစုံသည့်သုံးဖက်မြင်အမြင်အာရုံစွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောပုံများပါရှိသည်။
ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ရောင်သောစာသားနှင့်ဂရပ်ဖစ်များသည်ခိုင်ခံ့သောအရောင်များဖြင့်လှပသောမှေးမှိန်ထားသောပုံရိပ်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် UV မှင်များဖြင့်တိုက်ရိုက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းဖြစ်သည် (ဤသည်စျေးပေါသောစတစ်ကာမဟုတ်ပါ !!)
သေဆုံးသည့်တံဆိပ်တစ်ခုစီသည်သတ္တုနှင့်ကြွေဆေးရောင်စုံရောနှောမှုများကိုပေးထားပြီးခေတ်သစ်ခေတ်များ၌အလွန်လူကြိုက်များသောပုံစံဖြစ်သည်။ MEDALS သည်အခမဲ့စူပါပရီမီယံ ၁-၁ / ၂″ အကျယ်အ ၀ န်းဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအရောင်များနှင့်အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးဖြင့်ချုပ်ထားသည်။
တံဆိပ်၏နောက်ဖက်တွင်ချောမွေ့သော acrylic ရှိပြီးသတ္တုတံဆိပ်ကပ်ထားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထွင်းထုခြင်းနှင့်အတူ။
တံဆိပ်များကိုရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးနီတို့ပေါ်တွင်ရေးဆွဲပြီးစာသားအားလုံးကိုအနက်ရောင်ဖြင့်ရေးထိုးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်အမှတ်တံဆိပ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ပါကအမှာစာကိုချသည့်အခါ (စာသား ၄ လိုင်းအထိခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၂၂ လုံးနှင့်အက္ခရာတစ်ခုစီအတွက်အက္ခရာ ၂ လုံးအထိ) အတိအကျရိုက်ထည့်ပါ။